Ny teny hoe "Split View" dia hitondra an'i Apple ho any amin'ny Fitsarana Tampony any India | Avy amin'ny mac aho
Ny teny hoe "Split View" dia hitondra an'i Apple ho any amin'ny Fitsarana Tampony any India
Ny iOS 9 sy ny OS X El Capitan dia samy nanolotra mode multitasking isan-karazany amin'ny iPads sy Macs mifanentana, ao anatin'izany ny fisehoan'ny efijery antsoina hoe Split View. Ity fe-potoana ity dia eo am-pelatanan'ny Fitsarana Tampony ao Delhi, izay nitaky ny hampijanonan'ny Apple ny fampiasana sy ny rindrambaiko marketing miaraka amin'io fe-potoana io any India, raha tsy izany fanitsakitsahana marika amin'ny alàlan'ny patanty.
Ny fitoriana an'ity fandikana patanty ity dia napetraky ny orinasa iray antsoina hoe Vyooh, mpivarotra Microsoft, izay tompon'ny marika famantarana amin'ny anarana hoe 'SplitView' araka ny notaterin'ny The Indian Times. Aza adino fa ny Apple vao haingana koa dia nanana fihazakazahana amin'ny fahamarinana olana amin'ny fivarotana ny terminal namboarina.
Araka ny hitantsika ao amin'ny Indian Times:
Ny Fitsarana Avo ao Delhi dia nanentana ny amerikana goavam-be amerikana Apple tsy hampiasa ny anarana 'SplitView' amin'ny iray amin'ireo vokatra na serivisy misy azy, toa ny iPad, iPhone na ny rafitra fiasan'ny iOS aorian'ny orinasa mpamorona rindrambaiko iray monina any Delhi sy tsy dia fantatra loatra Vyooh dia namindra ny fitoriana tany amin'ny fitsarana tampony, tamin'ny filazàna fa fanitsakitsahana marika […] Ity baiko ity dia mandefa hafatra mafonja amin'ireo orinasan-rindrambaiko iraisam-pirenena momba ny fanajana ny zon'ny mpamorona lozisialy any India.
Tsy vao voalohany izao Apple no sendra olana amin'ny teny hoe Split View, hatramin'ny volana martsa Mpanamboatra rindrambaiko Indiana Rohit Singh, Notoriany teo alohan'ny Fitsarana Avo tao Delhi ihany koa ny orinasa Cupertino noho ny fangalarana ny mari-pamantarana 'SplitView'. Azo antoka fa efa nieritreritra momba izany ny sasany aminareo ary izany dia i Singh dia ilay lehilahy mitantana an'i Vyooh ary manana fampiharana antsoina hoe SplitView, DiskView ary ViewScribe.
Ny rindrambaiko SplitView an'i Vyooh dia nanomboka ny taona 2006. Io rindrambaiko io dia ahafahan'ny mpampiasa miasa miaraka amina varavarankely maro amin'ny efijery tokana. Ankehitriny dia manana hatramin'ny 9 Mey i Apple hanolotra ny raharaham-pitsarany manohitra ity fanapahan-kevitra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny teny hoe "Split View" dia hitondra an'i Apple ho any amin'ny Fitsarana Tampony any India
Maimaimpoana ny Office amin'ny iPad Pro 9,7 "vaovao
Kobe Bryant dia kintana amin'ny doka Apple TV vaovao